TOP 10 Oprah Winfrey Quotes Maka 2020 - Quedia Pedia
11 ruturu na okwu
Ndụ bụ onyinye ma ị ga na-ele ya anya dị ka ihe dị oke ọnụ. Oprah Winfrey mgbe nile a okwu mkpali, onye na-ekwu maka ndụ na ihe ndị dị adị.
Ọ na-ekwu na ọ dị oke mkpa ịnabata ndụ dịka ọ na-abịa, mana n'otu oge ahụ, mmadụ kwesịrị ijide n'aka na ịhọrọ oke akụkụ nke ndụ gị. Ọ niile dabere na gị ma ịchọrọ inwe obi ụtọ. Ya mere, ịkwesịrị iji amamihe kpebie ihe.
Ikwesiri igba mbọ hụ na ndụ bụ onyinye nye gị, ọ gaghị abịara gị ọzọ. Obere oge ị nọrọla, ma ị nweghị ike ịtụ anya na a ga-emeghachi ya ugboro ugboro. N'ihi ya, ọ dịịrị gị ka ị na -esi ele ihe anya, yabụ, gbaa mbọ hụ na ị na-eleba anya n'ihe.
Ọzọkwa, Oprah Winfrey kwuru na anyị kpebiri ndị anyị na ha ga-anọ! Ọ dị anyị n'aka otu anyị si ewere ihe. Yabụ, ọgbọ ndị ọgbọ anyị chọrọ ka anyị nọrọ ka ihe niile dị anyị n'aka. N'ihi ya, anyị ga-ahọrọ mgbe niile ka anyị nọrọ ndị na-ebuli anyị elu.
Anyị ekwesịghị ikwe ka ndị ọzọ kụda anyị mmụọ. Ọ dị mkpa ịnọnyere ndị na-akwali anyị ma kpalie anyị iji nweta ihe ịga nke ọma ọ bụghị ịnọnyere ndị na-aghọ ihe kpatara nsogbu anyị.
Oprah Winfrey Quotes abụwo mgbe nile ihe nye ọtụtụ ndị agbamume, a hụkwala ya ka ọ na-akpali ndị mmadụ inwe ọ happyụ na amamihe.
Ọ na-ekwu na ịkwesighi ịgụta mmejọ gị dịka mmehie kacha njọ ị nwetagoro, wee gaa na-echegharị maka ya oge ndụ gị niile. Kama, okwesiri itinye ha akara mgbe obula dika ihe nkuzi gi ma mara na ha ewetara gi ihe a. Ọ bụ mmejọ gị na-eme ka ị mara ihe!
Oprah Winfrey nọ kemgbe ụwa na-akpali ndị mmadụ. N'ihi ya, ọ na-ekwu na ị ga-ebi ndụ dị mma, ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ị ga-enwe ike inweta ọtụtụ ihe na ya.
Oprah Winfrey Quotes bụ ịkọwa onwe ya na n'ọtụtụ n'ime ha, ị ga-ahụ ka ọ na-arịọ ndị mmadụ ka ha lee omimi nke ndụ kama ịhụ naanị ogologo ya.
O kwuru na ọ dị mkpa bie oge niile na ndụ gị, kama ịhụ ka ọnụnọ ole ị dị ndụ!
Ndụ bụụrụ anyị niile ngọzi. Ọ bụ njem dị ịtụnanya nke nwere oke nke ya…
Soro naanị ndị ga-ebulikwa gị elu. - Oprah Winfrey
Mkpa inwe ndị mmadụ na ndụ gị ga-agba mmụọ gị ume, na-akpali gị, na-akpali gị…
Ọ bụrụ n’ịlele ihe ị nwere na ndụ, ị ga na - enwe ihe ndị ọzọ. - Oprah Winfrey
Ndụ bụ ezigbo onye nkuzi ị ga-enweta. Ọ dịghị ihe ọzọ karịa ndụ ga-akụziri gị ihe kachasị…
Become ga-abụ ihe ị kwenyere, ọ bụghị ihe ị chere ma ọ bụ ihe ị chọrọ. - Oprah Winfrey
Anyị niile na-agbaso otu ụkpụrụ nke na-eduzi anyị na ndụ. N'otu oge, niile…
Ihe kasịnụ ị ga - enweta bụ ibi ndụ nke nrọ gị. - Oprah Winfrey
Ọ bụ gị kpatara ndụ gị. Can't gaghị anọgide na-ata onye ọzọ ụta maka dysfunction gị. Ndụ n’ezie ịga n’ihu. - Oprah Winfrey
Ọ bụ gị bụ onye ji ndụ gị. Ma ihe agbanyeghi na…